Inona ny nomeraon'ny entana Amazon?
Amin'ny maha mpivarotra Amazona anao, tokony ho fantatrao fa ny entana rehetra amin'ny Amazon dia manana ny mari-pamantarana misy azy. Ny idiran'ny vokatra dia azo ampiasaina hamoronana pejy vaovao sy lisitra vaovao. Betsaka ny sokajy amin'ny Amazon no manana UPC voafaritra. Ny mpamokatra amboara amazonin'ny Amazon UPCs irery ihany no GS1 (Global Standard 1). Ity orinasa ity dia manome ny fenitra iraisam-pirenena ho an'ny famandrihana barcoding - servidor dedicado gratis. Ny Global Standard 1 dia mamoaka ny singa rehetra amin'ny Amazon amin'ny Global Trade Item Number.
Mba hanaraka ny fepetra GS1, mila manaiky ny karazana vokatra tianao amin'ny varotra ianao, ny kalitao amin'ny angona vokarinao, ary ny fepetra manokana amin'ny fivarotana amin'ny sokajy vokatra.
Ity lahatsoratra ity dia hanazava ny anjara asan'ny GTINs sy ny UPC noho ny fampiroboroboana ny vokatrao amin'ny sehatra varotra ara-barotra Amazon.
Na izany aza, alohan'ny hanohizantsika bebe kokoa, tokony hanamarika aho fa ny Amazon dia hanomboka hanara-maso ny fango UPC voatendry amin'ny ASINs isan-karazany eo amin'ny tsenam-bahiny manoloana ny angona GS1. Mety midika izany fa ny mpivarotra rehetra tsy misy lisitra UPC dia azo esorina amin'ny valin'ny fikarohana Amazon.
Amazon UPC codes: inona ireo ary nahoana isika no mila izany?
Ny code UPC dia mari-pamantarana baikana izay nomena manokana ho an'ny singa tsirairay. Ampiasaina betsaka any Etazonia, Angletera, Kanada, Aostralia, Nouvelle Zélande ary firenena hafa miteny miteny anglisy. Izy io dia misy tarehimarika tarehimarika 12 izay maneho ny prefix momba ny orinasa UPC, ny lisitry ny singa, ary ny marika famantarana. Ireo tarehimarika voalazan'ny GS1 amin'ireo tompon'ny marika manokana dia tokony hanamarika ny vokatra miaraka amin'ny UPC symbols.
Ny tarehimarika dimy manaraka dia maneho ny fanondroana zavatra. Notendren'ny tompon'ny marika izy ireo hanondro zavatra iray manokana.
Ary ny isa farany dia antsoina hoe mari-panamarinana. Izy io dia tarehimarika voahevitra izay miorina amin'ny mari-pamantarana takelaka MOD amin'ny alàlan'ny tarehimarika teo aloha.
Ny codec UPC dia mety ho karazany roa - UPC-A sy UPC-E. Ny fahasamihafana dia hoe ny codec UPC-E dia fohy kokoa ary manilikilika ny olona. Midika izany fa tsy hahita ny 0 ao anaty barcode ianao, raha tsy ao anatin'ny GTIN.
Inona no ASIN (Amazon Standard Identification Number)?
Ny nomeraon-daza nomerika Amazon dia ampiasaina hamantarana ny zavatra ao Amazon. Izy ireo dia misy tsanganana miavaka 10 misy litera sy tarehimarika. Ny code ASIN amin'ny zavatra takiana azonao jerena ao amin'ny pejin'ny fampahalalam-baovao Amazon. Tsara homarihina fa ny Amazon dia mampiasa ny barcode ISBN. Ny isa mitovy amin'ny mari-pamantarana dia mitovy amin'ny boky toy ny ISBN. Na izany aza, ho an'ny zavatra hafa rehetra, ny tarehimarika vaovao vaovao dia natsangana rehefa navoaka ny katalaogy Amazon.
Ny ASIN code an'ny endri-tsoratra dia napetraka eo amin'ny pejy antsipirihany momba ny vokatra hafa amin'ny antsipirihany momba ny vokatra hafa toy ny loko, habe, sns. Ity kaody ity dia azo ampiasaina mba hikaroka ireo vokatra ao amin'ny katalaogin'i Amazon. Amin'ny alalan'ny fandefasana endritsoratra ASIN na code ISBN ao amin'ny boaty fikarohana Amazon, dia hahazo valiny fikarohana ianao amin'ity code ity (amin'ny fehezan-dalàna misy lisitra ao amin'ny katalaogy).